I-Qualcomm Snapdragon 710: Inkqubo entsha ye-middle-range processor | I-Androidsis
Iinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kwaqinisekiswa ukuba I-Qualcomm yayiza kumilisela usapho olutsha lweeprosesa. Imalunga ne-Snapdragon 700, efuna ukugxila kuluhlu oluphakathi kunye naphakathi kwepremiyamu. Ke beza kugubungela umsantsa ophakathi kosapho lwama-600 nama-800. Okokugqibela, iprosesa lokuqala lolu sapho lutsha ngoku lusemthethweni. Imalunga ne-Snapdragon 710.
Umbono wale processor kukubonelela abasebenzisi nge Amava afanayo kwinto abayifumanayo ngesiphelo esiphezulu, kodwa kwiifowuni ezingabizi kakhulu. Kwakhona, njengoko unokulindela, ubukrelekrele bokudlala budlala indima ebonakalayo kwi-Snapdragon 710.
Sifumana ii-cores ezisibhozo kule processor. Ezimbini kuzo kukusebenza okuphezulu, ngesantya se-2.2 GHz, ngelixa ezinye ezintandathu zifikelela kwisantya se-1,7 GHz.Iya kuba nenkxaso ukuya kuthi ga kwi-16 GB ye-RAM. Iinkcukacha ezingakhange ziqwalaselwe, kuba ayiqhelekanga ukuba kubekho iifowuni ezinamandla.
I-Snapdragon 710 ikwanemigangatho emininzi yobukrelekrele bokuzenzela. Kubonakala ngathi iyakuba yi-DSP Hexagon, esele ikho kwezinye iiprosesa zeQualcomm. Kuyatshiwo ukuba iyakuphindaphinda kabini ukusebenza komanduleli wayo uSnapdragon 660. Sikwafumana iprosesa yomfanekiso weSpectra 250 iyakuvumela ukusetyenziswa kweekhamera ukuya kuthi ga kwi-32 MP okanye iikhamera eziphindwe kabini ukuya kuthi ga kwi-20 + 20 MP.
Iividiyo ezingama-4K zikwafikelela kumbindi ophakathi enkosi ku-Snapdragon 710. Kuba iprosesa iyakuvumela ukuveliswa kwayo kwakhona. Ngokunxibelelana, iya kuba nemodem yeX15 enokunika isantya sokukhuphela kwi-Mbps ezingama-800. Ukongeza, iya kuphumeza i-4 × 4 MIMO ye-LTE kunye ne-2 × 2 ye-Wi-Fi.
I-Snapdragon 710 yakhelwe kuyilo lwe-10nm. I-Qualcomm iqinisekisile ukuba iprosesa ngoku ilungile kwaye iyimveliso. Ke abavelisi bangaqala uku-odola iifowuni zabo. Kusenokwenzeka ukuba kwiinyanga ezizayo siza kubona isixhobo kwimakethi sisebenzisa le processor intsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Snapdragon 710: Inkqubo entsha kumgangatho ophakathi
I-OnePlus 6 ifumana i-5 ngaphandle kwe-10 kumanqaku e-iFixit